Buyini ubuchwepheshe beBlockchain? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Disemba 11, 2017 Lwesine, Disemba 14, 2017 Douglas Karr
Bheka isikweletu sedola, futhi uzothola inombolo ye-serial. Kusheke, uzothola umzila nenombolo ye-akhawunti. Ikhadi lakho lesikweletu linenombolo yekhadi lesikweletu. Lezo zinombolo zifakwe phakathi nendawo endaweni ethile - kungaba ku-database kahulumeni noma ohlelweni lokubhanga. Njengoba ubheka idola, awazi ukuthi yimuphi umlando walo kodwa. Mhlawumbe yebiwe, noma mhlawumbe ikhophi yomgunyathi. Okubi kakhulu, ukulawulwa okuphakathi kwedatha kungasetshenziswa kabi ngokuprinta okuningi, ukuntshontsha, noma ukuphatha imali - okuvame ukuholela ekwehlisweni kwemali kuyo yonke imali.
Kuthiwani uma… kuyo yonke imali ekhokhwayo yedola, isheke, noma ukuthengiselana kwekhadi lesikweletu, bekukhona okhiye ababethelwe abangasetshenziselwa ukufinyelela kumarekhodi okwenziwe? Ucezu ngalunye lwemali lungaqinisekiswa ngokuzimela ngenethiwekhi enkulu yamakhompyutha - akukho ndawo eyodwa enayo yonke idatha. Umlando ungadalulwa ngokusebenzisa yezimayini idatha nganoma yisiphi isikhathi, kunethiwekhi yamaseva. Ucezu ngalunye lwemali nokuthengiselana ngakunye nakho kungaqinisekiswa ukukhomba ukuthi ngobani abangabanikazi, lapho luvela khona, ukuthi luyiqiniso, futhi lungaqopha nokuthengiselana okulandelayo uma kusetshenziswe kuthengiselwano olusha.
I-blockchain iyi-ledger esezingeni eliphakathi nendawo yakho konke okwenziwayo kunethiwekhi yontanga. Kusetshenziswa lobu buchwepheshe, ababambiqhaza bangaqinisekisa ukuthengiselana ngaphandle kwesidingo segunya eliphakathi lokuqinisekisa. Izicelo ezingaba khona zifaka phakathi ukudluliswa kwemali, ukuthengisa okuthengiswayo, ukuvota nokunye okuningi okusetshenziswayo.
IBlockchain ubuchwepheshe obusizayo obunika amandla cryptocurrency njengeBitcoin, i-Ethereum, i-Ripple, i-Litecoin, i-Dash, i-NEM, i-Ethereum, i-Monero ne-Zcash. Le infographic evela ku-PWC inikeza ukubukeka okuningiliziwe kubuchwepheshe be-blockchain, ukuthi isebenza kanjani, nokuthi yiziphi izimboni ezingathinteka kuyo.
Ngenkathi kunethoni ye-buzz ezungeze iBitcoin njengamanje, ngingakukhuthaza ukuthi ungazinaki izindaba eziningi bese ugxila kubuchwepheshe obuyisisekelo. Ochwepheshe abaningi kakhulu abangafundile, okungebona ubuchwepheshe bafanisa iBitcoin nokujaha igolide, noma ibhamu lesitoko, noma imfashini nje. Zonke lezi zincazelo nokulindelwe kwenziwa lula. I-Bitcoin ayifani nenye imali eyake yadalwa, sibonga ubuchwepheshe be-blockchain. IBlockchain ubuchwepheshe obuyinkimbinkimbi obudinga amandla ekhompyutha njengoba besingakaze sibudinge ngaphambili. Okuyisisekelo yezimayini ukuthengiselana kungadinga amashumi ezinkulungwane zamaRandi ezintweni zokusebenza, kubize amashumi amadola, kusetshenziswe inani elithile lamandla, futhi kudinga imizuzu noma amahora omsebenzi.
Lokho kusho, cabanga ngomhlaba lapho isitifiketi sakho sedijithali sithenjwa khona ngoba siqukethe okhiye bomlando wazo zonke izigaba ozithathile eziqinisekiswe ngontanga… ngaphandle kokubiza inkampani yokuqinisekisa. Izwe lapho ungadingi ukuhlola ngesandla umlando webhizinisi kepha, esikhundleni salokho, ungaqinisekisa umsebenzi abawufezile njengoba kuchaziwe kowabo vimba inkontileka yokuthengisa enikwe amandla yi-blockchain. Isikhangiso singagcina umlando wokukhonjiswa kwaso nokuthengiselana okuya kumuntu ochofozayo ukuqinisekisa ukuthi akusiwo ukuchofoza okungumbombayi.
IBlockchain ubuchwepheshe obuthembisayo obungasetshenziswa cishe noma kuphi. Ngibheke phambili ekuboneni okulandelayo!
Tags: ukukhangisablockchainukunika isitifiketicryptocurrencyilejayezimayiniukuthengiselanaukuqinisekiswa
Dec 12, 2017 ngo-2: 06 PM
I-Athikili Enhle. I-primer echazwe kahle kakhulu kwiBlockChain engiyibonile kuze kube manje! Ngiyabonga!
Dec 13, 2017 ku-11: 58 AM
Kahle kahle. Siyabonga ngokubeka lokhu kucace kangaka.